China: Fanentanana ny mba hampiasàna ny tena anarana eo anivon’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2010 19:51 GMT
Ho an'ny maro amin'ny mafana fo amin'ny fampielezam-baovao, ny fametrahana ny tena anarana eo anivon'ny aterineto dia fanitsakitsahana ny fiainana manokana, kanefa, ao China, misy sasantsasany amin'ireo olon-tsotra mafana fo no manentana ny hametrahana ny tena anaran'ny tena amin'izay rehetra atao eo anivon'ny aterineto mba hioharana ny tahotra.
Tamin'ny volana Marsa lasa iny, Zhan Lifan mponina iray amin'ny aterineto dia nanoratra lahatsoratra iray, “ Fibabohan'ny mpiondana aterineto iray mihanjahanja” ho fiarovana ny filazana ny fahamarinana amin'ny fampiasana ny tena anarana.
Io Alahady io (13 Jona), Ai Weiwei dia nandefa fanentanana iray amin'ny hampiasana ny tena anarana amin'ny Twitter. Ninoany fa ny fisehoana masoandro amin'ny tena anarana no dingana voalohany ho ody tahotra (via voa):
Dingana iray ilaina io. Mazava loatra fa afaka mijanona tsy mitonona anarana mandritry ny fiainanao manontolo ianao. Kanefa, tsy ampy ny fitsikerana fotsiny ny governemanta. Ny fiezahantsika manafina foana ny maha isika antsika sy ny tahotra ananantsika noho izay nambarantsika dia vao maika manome hery ny fitondrana tsy refesi-mandidy. Mila miteny imasom-bahoaka amin'ny fomba mangarahara isika sy mangataka ny governemanta mba hanao toy izany koa. Raha tsy manana herimpo hanao izany isika ka manohy miaina anaty tahotra, ho tafahoatra izany tahotra izany ary ty hisy zavatra ho azontsika ovàna.
Sarotra ho an'ny manampahefana ny hisambotra antsika rehetra. Ho sarotra fotsiny rehefa ny tsirairay no afaka hidradradradra ny fahatsapany ho ren-tany ho ren-danitra. Tsy vita tamin'ny vy be tsy azo ahontsona akory ny manampahefana, rehefa tsapan'izy ireo fa manao zavatra mitovy amin'ny faharesen-dahatra mitovy ny olon-drehetra, tsy maintsy hanaja ny fomba fijerin'ny vahoka ry zareo.
Tsy nisy iray andro akory, anjatony ireo Sinoa mpampiasa aterineto nirotsaka tamin'ilay ezaka ary namoaka ny tena anaran'izy ireo.
Ilay mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona, Pu Zhiqiang, dia nanasongadina fa raha mampiasa ny tena maha izy azy ny olona, hanohana azy ireo bebe kokoa ny vahoaka (via voa).
Raha tsy mampiasa ny tena anaranao ianao, tsy misy hahalala hoe iza ianao nefa ny governemanta afaka mahafantatra ny mombamomba anao toy ny singana mofomamy iray. Tsy misy fomba mihitsy hahafahanao midify ny fanarahamason'ny mpitandro filaminana sy ny polisin'ny aterineto. Fanampin'izany, raha tsy mampiasa ny tena anarana, sarotra ho anao ny hisarika ny sain'ny olona, ny olona te-hahalala hoe iza marina ianao.
Lahatsoratr'i Oiwan Lam nivoaka tao amin'ny Global Voices Advocacy